အသင်းကြီးအများစု အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၂) ဗုဒ္ဓဟူုးနေ့ပွဲစဉ်များ
4 Oct 2018 . 9:07 AM
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၂) ဗုဒ္ဓဟူုးနေ့ပွဲတွေမှာတော့ အသင်းကြီးအများစု ရလဒ်ကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ PSG အသင်းဟာ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရရှိခဲ့ပြီး အက်သလက်တီကို ၊ ဘာစီလိုနာ ၊ ဒေါ့မွန် ၊ အင်တာမီလန် ၊ နာပိုလီတို့ဟာ နိုင်ပွဲကိုယ်စီ ရယူခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ့မွန်နဲ့ မိုနာကိုတို့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ပုံစံကောင်းရနေတဲ့ ဒေါ့မွန်က( ၃ – ၀ ) နဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ့မွန်အတွက် ဂိုးတွေကိုတော့ လာဆန်Larsen ၊ အယ်လ်ကာဆာ Alcácer နဲ့ မာကိုရွိုက်စ် Reus တို့က ပွဲချိန်(၅၁) (၇၂ )နဲ့ (၉၂)မိနစ်တွေမှာ သွင်းယူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ရလဒ်တွေကျဆင်းနေတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီး စပါးအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ( ၂ – ၄ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ စပါးအသင်းကတော့ ခုချိန်ထိ ဥရောပအသင်းကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသေးတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲဟာ အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ပရိသတ်အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စပါးအသင်းအတွက် ဂိုးတွေကို ပွဲချိန်(၅၂)နဲ့ (၆၆)မိနစ်တွေမှာ ဟယ်ရီကိန်း Kane နဲ့ လာမယ်လာ Lamela တို့ကသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ဂိုးတွေကိုတော့ ပွဲချိန်(၂)မိနစ်နဲ့ (၂၈)မိနစ်တွေမှာ ကော်တင်ဟို Coutinho နဲ့ ရာကီတစ် Rakitić တို့ကသွင်းယူခဲ့ပြီး ပွဲချိန်(၅၆)မိနစ်နဲ့ မိနစ်(၉၀)မှာတော့ မက်ဆီ Messi က(၂)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ နာပိုလီနဲ့ လီဗာပူးလ်ပွဲမှာတော့ နာပိုလီအသင်းက အိမ်ကွင်းမှာ နိုင်ပွဲရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး နာပိုလီအသင်းအတွက် အဖိုးတန်အနိုင်ဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်မိနစ်(၉၀)မှာ အင်ဆစ်ဂနီ Insigne ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၂) ဗုဒ္ဓဟူုးနေ့ ရလဒ်များ
PSG6– 1 Crvena Zvezda
Lokomotiv Moskva0– 1 Schalke 04
Atlético Madrid3– 1 Club Brugge
Borussia Dortmund3–0Monaco
Tottenham Hotspur2–4Barcelona
PSV 1 –2Internazionale
Porto 1 –0Galatasaray
Photo: FC Barcelona Twitter , Napoli twitter
အသငျးကွီးအမြားစု အောငျပှဲခံခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၂) ဗုဒ်ဓဟူုးနပှေဲ့စဉျမြား
ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၂) ဗုဒ်ဓဟူုးနပှေဲ့တှမှောတော့ အသငျးကွီးအမြားစု ရလဒျကောငျးခဲ့ကွပါတယျ။ PSG အသငျးဟာ ဂိုးပွတျနိုငျပှဲတဈပှဲရရှိခဲ့ပွီး အကျသလကျတီကို ၊ ဘာစီလိုနာ ၊ ဒေါ့မှနျ ၊ အငျတာမီလနျ ၊ နာပိုလီတို့ဟာ နိုငျပှဲကိုယျစီ ရယူခဲ့ကွပါတယျ။
ဒေါ့မှနျနဲ့ မိုနာကိုတို့ ပှဲစဉျမှာတော့ ပုံစံကောငျးရနတေဲ့ ဒေါ့မှနျက( ၃ – ၀ ) နဲ့ အိမျကှငျးမှာ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒေါ့မှနျအတှကျ ဂိုးတှကေိုတော့ လာဆနျLarsen ၊ အယျလျကာဆာ Alcácer နဲ့ မာကိုရှိုကျဈ Reus တို့က ပှဲခြိနျ(၅၁) (၇၂ )နဲ့ (၉၂)မိနဈတှမှော သှငျးယူပေးခဲ့ကွပါတယျ။ လကျရှိမှာ ရလဒျတှကေဆြငျးနတေဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးကတော့ အကောငျးဆုံးပွနျလာနိုငျခဲ့ပွီး စပါးအသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ ( ၂ – ၄ )နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ စပါးအသငျးကတော့ ခုခြိနျထိ ဥရောပအသငျးကွီးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ အားနညျးခကျြတှေ ရှိနသေေးတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။ပှဲဟာ အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှနေဲ့ ပရိသတျအကွိုကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ စပါးအသငျးအတှကျ ဂိုးတှကေို ပှဲခြိနျ(၅၂)နဲ့ (၆၆)မိနဈတှမှော ဟယျရီကိနျး Kane နဲ့ လာမယျလာ Lamela တို့ကသှငျးယူခဲ့ကွပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ ဂိုးတှကေိုတော့ ပှဲခြိနျ(၂)မိနဈနဲ့ (၂၈)မိနဈတှမှော ကျောတငျဟို Coutinho နဲ့ ရာကီတဈ Rakitić တို့ကသှငျးယူခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ(၅၆)မိနဈနဲ့ မိနဈ(၉၀)မှာတော့ မကျဆီ Messi က(၂)ဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့ပါတယျ။ နာပိုလီနဲ့ လီဗာပူးလျပှဲမှာတော့ နာပိုလီအသငျးက အိမျကှငျးမှာ နိုငျပှဲရှာဖှနေိုငျခဲ့ပွီး နာပိုလီအသငျးအတှကျ အဖိုးတနျအနိုငျဂိုးကိုတော့ ပှဲခြိနျမိနဈ(၉၀)မှာ အငျဆဈဂနီ Insigne ကသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၂) ဗုဒ်ဓဟူုးနေ့ ရလဒျမြား
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမလဲ (၂)
by Ko Kyue .3mins ago
ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းမှာ Clean Sheets အများဆုံးရယူခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားများ
by Naing Linn . 59 mins ago
Pep Guardiola အချိန်မီ ဖြေရှင်းရတော့မယ့် Set-Pieces ပြဿနာ
၀က်စ်ဟမ်းနဲ့သရေကျတဲ့ပွဲမှာ အချင်းများခဲ့ကြတဲ့ Tyrone Mings နဲ့ El Ghazi
ဒေါ့မွန်နဲ့ ကစားမယ့် ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်လူစာရင်းမှာပါဝင်လာတဲ့ Messi